Wloks को बारेमा। तपाइँको व्यवसाय सुरु को लागी डिजाईन क्रिएटिव अनलाइन
Wloks को बारेमा
जोस एन्जेल | | प्रतीकहरू, छविहरू, पुनरावृत्त
जब हामी मध्ये कुनै एक व्यापार दुनिया को माध्यम बाट आफ्नो यात्रा शुरू, हामी शंका छ। विशेष गरी यदि यो इन्टर्नेटमा प्रतिनिधित्व गर्ने कम्पनीहरूको बारेमा हो। लोगो, वेबसाइट, विज्ञापन सबै एक छवि बोक्छन् को डिजाइन।
त्यो छवि पूरा गरिनु पर्छ, र color र आकार तपाईंको विज्ञापनको लागि आवश्यक छ। कम्पनीहरूलाई काममा लगाउनु जुन तपाईंलाई सही स्थितिमा ल्याउँदछन् कहिलेकाँही महँगो पर्दछ, तर यदि तपाईंले प्रयास गर्नुभयो भने, Wloks राम्रो सहयोगी हुन सक्छ। Wloks एक आइकन, मकअप र फोटोग्राफी कम्पनी हो।
स्टार प्याकेजले यी उपकरणहरूको, 53, 49 and र includes१ समावेश गर्दछ जसले तपाईंलाई तपाईंको कम्पनीको वरिपरि कर्पोरेट छवि प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। एकचोटि तपाईले यस प्याकेजमा सबै अधिकारहरू प्राप्त गर्नुभयो तपाईलाई तिनीहरूको आवश्यकता अनुसार सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाइँले पाठ्यक्रमको कम्पनीलाई कुनै उल्लेख गर्नुपर्दैन।
यो प्याकेज कसरी पाउने
को आधिकारिक वेबसाइटमा जानुहोस् wloks र प्याकेज छनौट गर्नुहोस्। यदि तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ र उत्पादको मूल्य कम गर्न छुट कोड छ भने, फाइदा लिनुहोस्। आजको मूल्य २eयुरो अनुमानित छ। जे होस् उनीहरूको इजाजतपत्र अनुसार उनीहरूले मूल्य परिवर्तन गर्ने अधिकार राख्छन् जुन यो तिनीहरूलाई उचित छ।
यसको श्रोतहरू ब्लगरहरू, व्यवसाय र कलाकारहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न बढ्दैछन्, त्यसैले यो व्यक्ति को कुनै पनि प्रकार लाई अनुकूलन। दिमागमा राख्नुहोस् कि एक पटक तपाईले यी प्रकारका उत्पादनहरूबाट लाभ लिनुभयो भने, तपाईंसँग द्रुत रूपमा डाउनलोड गर्न योग्य फाइल हुनेछ, त्यसैले पैसा फिर्ती सम्भव छैन। केहि चीज जुन सामान्य रूपमा यस प्रकारको उत्पादनहरूमा तार्किक हुन्छ, तर त्यो कहिल्यै सम्झन दुख्दैन।
कुनै श doubt्काको लागि यस प्रकारको उत्पादनको बारेमा सँधै सम्पर्क फारमको माध्यमबाट हुन्छन् वा इ-मेलबाट। अवश्य पनि, वेब अंग्रेजीमा छ र प्राविधिक सेवा पनि। तर गुगल अनुवादकसँग निश्चित गर्न नसकिने केही पनि छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » Wloks को बारेमा
उत्कृष्ट योगदान। जानकारी को लागी धेरै धन्यबाद। खुशीका छुट्टिहरु।
Haillyn लाई जवाफ दिनुहोस्
जुआन | आइकनहरू सिर्जना गर्नुहोस् भन्यो
प्रभावी ढंगले wloks पृष्ठ प्रविष्ट गर्नुहोस् र यदि उनीहरूले के प्रस्ताव गर्छन् भने। मैले भन्नै पर्छ कि यो देहात प्रवृत्तिको नजिक हुनेहरूका लागि आदर्श हो, म यसलाई देशको घर, हाँगा, घाँस, क्षेत्रको भूगोलको विचित्र दृश्यहरूको दृष्टान्तका लागि भन्छु। एउटा मैले मनपराएको भनेको पुस्तक र कफीको कप देखाउँदछ, हुनसक्छ मेरो उपन्यास ब्लगको कारण मसँग छ।
उह ठीक छ, म मेरो लागि टिकटको लागि पनि सोध्न सक्छु, म यसलाई हेर्दै रहन्छु ...
जुआनलाई जवाफ दिनुहोस् आइकनहरू सिर्जना गर्नुहोस्
जोस एन्जेल भन्यो
यसलाई जाँच गर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद! तपाईका अनुभवहरू थाहा पाउँदा खुशी लाग्यो!
जोस एन्जललाई जवाफ दिनुहोस्
रचनात्मकता विकास गर्न कम्फर्ट
पीटर कोगलरको शयनकक्षहरूमा सम्मोहन ऑप्टिकल भ्रम